tom, Mpanoratra ao amin'ny mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Tom Howard
Ny ady hevitra momba ny fanaovan-dalàna ny Marijuana
Nanome ny: Justice Kaitlin Ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2019 dia naneho fa mihoatra ny 70% ny Amerikanina no mankasitraka ny fanaovana marijuana ho ara-dalàna. Nandritra ny taona maro, fikarohana bebe kokoa no nanasongadina ny tombontsoa azo avy amin'ny rongony sy fitsaboana amin'ny rongony. Vokatr'izany dia olona an-tapitrisany manerantany no miantehitra amin'ny famoahana hemp hitsaboana aretina sy olana isan-karazany. Lasa indostrian'ny ... Hamaky bebe kokoa
Nomena: https://2fast4buds.com/ Tamin'ny taona 2020, hitan'i Gallup fa ny 68% an'ny Amerikanina nanaparitaka firaketana dia nanohana ny fananganana marijuana ho ara-dalàna - fiakarana mahatalanjona avy amin'ny 12% fotsiny tamin'ny 1969 rehefa nanomboka nametraka ny fanontaniana ity maso ivoho ity. . Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, firenena roa - Kanada sy Uruguay - ary koa fanjakana 17 any Etazonia no nanome lalana ara-dalàna ny fampiasan'ny olon-dehibe an'io fanafody io. Mbola firenena maro, fanjakana,… Hamaky bebe kokoa
Lalàna momba ny fitantanan-drongony sy ny fanararaotana - Volavolan-dalàna momba ny lalàna momba ny ara-dalàna federaly
Mikasika izay mety ho dingana tsara mankany amin'ny fampanarahan-dalàna ny rongony federaly, Chuck Schumer - Senatera ao New York - dia nanolotra volavolan-dalàna iray hanakanana ny marijuana amin'ny ambaratonga federaly ny 14 Jolay 2021. Ny volavolan-dalàna dia antsoina hoe lalàna mifehy ny rongony sy ny fahafaha-manao ary ny hevi-dehibe amin'ity hetsika ity dia ny fanonganana marijuana amin'ny Controlled… Hamaky bebe kokoa
Fandaharana marijuana ara-pitsaboana Alabama
Ny governora Kay Ivey avy any Alabama dia nanao sonia ny lalàna faha-46 an'ny SB 17 tamin'ny 2021 Mey XNUMX, nanome marijuana ara-pitsaboana ny fanjakana. Ilay lalàna dia fantatra amin'ny hoe Darren Wesley "Ato" Hall Compassion Act, na ny "Compassion Act" raha fintinina, ary mamela ny fampiasana marijuana ara-pitsaboana hitsaboana aretina sasany. Tamin'ny fandaniana an'ity lalàna ity dia lasa Alabama no… Hamaky bebe kokoa
Nanaiky ny programa Marijuana ara-pahasalamana ny loholona ao North Carolina
Ny marijuana ara-pahasalamana dia nahazo fankatoavana teo amin'ny firaisan-kina tamina fivorian'ny komity tao amin'ny fivorian'ny fivoriamben'ny Repoblika Avaratr'i Carolina Avaratra tamin'ny Alarobia, ho famantarana fa afaka manana fanohanana marobe amin'ny fanjakana izay efa zon'ny lalàna izany. Na dia tsy noraketina tamin'ny fomba ofisialy aza ny vato dia hita fa ny Demokraty rehetra tao amin'ny komitin'ny fitsarana Senat dia nifidy izany, toy ny rehetra… Hamaky bebe kokoa
South Dakota dia manambara ny lisitry ny fepetra amin'ny programa marijuana ara-pahasalamana
Tamin'ny 30 Jona, ny departemantan'ny fahasalamana any Dakota atsimo dia nanambara ny lisitry ny fepetra voalohany izay ho voarakotry ny programa rongony ara-pitsaboana an'ny fanjakana, izay manan-kery amin'ny 1 Jolay aorian'ny fandalovan'ny mpifidy IM-26 tamin'ny Novambra lasa teo. Araka ny lalàna navoakan'ny mpifidy, ny marary dia tsy maintsy miaina 'toe-pahasalamana mandreraka' ary hohamafisin'ny dokotera fa… Hamaky bebe kokoa
Natao ara-dalàna tany Nevada ny toeram-pivarotana rongony rongony
Noraisin'i Nevada ara-dalàna ny karazana fananganana vaovao: ny efitrano fisakafoanana rongony. Vao namoaka volavolan-dalàna mamela ny karazana fatoriana rongony roa ny mpanao lalàna ao amin'ny fanjakana. Hatramin'ny naha-ara-dalàna ny rongony tany Nevada tamin'ny taona 2017, ny olona dia tsy afaka nihinana rongony tamin'ny toerana malalaka rehetra, dia tsy maintsy nahafantatra olona iray izay nipetraka tao Las Vegas izy ireo mba handany ilay vokatra. Milamina … Hamaky bebe kokoa
Mitsikera ny fandraràn'ny fanjakan'i Marijuana federaly ny mpitsara amin'ny fitsarana tampony
Ny alatsinainy 28 jona 2021 dia nisy mpiaro tsy nampoizina hamarana ny fandraràn'ny marijuana federaly ny fitsarana ambony amerikana. Taorian'ny nandavan'ny Fitsarana ny famerenana raharaha momba ny raharaha any Colorado izay niatrika raharaha ara-pitsaboana marijuana iray ary fanamby ho an'ny politikam-panjakana amin'ny fehezan-dalàna momba ny hetra, dia nanoratra fanambaràna ny mpitsara mpisolo toerana Thomas, fa ... Hamaky bebe kokoa
Fahazoan-dàlana ara-tsosialy New York ho an'ny rongony
Nanjary fanjakana faha-15 i New York mba hanara-dalàna ny rongony fialamboly taorian'ny fampielezan-kevitra naharitra taona maro. Tamin'ny 31 martsa 2021, ny fanjakana tao New York dia nanao ara-dalàna ny rongony ampiasan'ny olon-dehibe amin'ny alàlan'ny sonia ny lalàna Marijuana Regulation and Taxation (MRTA). Ny MRTA dia nametraka fepetra hametrahana rafitra mifehy mifehy ny fitsaboana, fampiasan'ny olon-dehibe ary ny rongony cannabinoid. Mahery vaika koa ilay fihetsika… Hamaky bebe kokoa
Fahazoan-dàlana mpamokatra rongony any New Mexico
Fahazoan-dàlana ho an'ny mpamokatra rongony any New Mexico Ny fanjakana any New Mexico dia ara-dalàna ny rongony ampiasan'ny olon-dehibe. Tamin'ny alàlan'ny fananganana ara-dalàna ny rongony, dia nampahafantarina tamin'ny fanjakana ny laharam-pahamehana rongony fampiasan'ny olon-dehibe. Raha te hijery izay lazain'ny volavolan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana mikambana bitika ianao, na mamaky momba ny fahazoan-dàlana New Mexico, azonao atao ny manamarina ireo rohy ireo. Amin'ity fotoana ity dia hitrandrahantsika… Hamaky bebe kokoa